ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ်အော်တို,အော်တိုရေဒီယိုက Universal,အီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal
မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal စင်ဟာ android 6.0 capacitive Multi-touch screen ကို, 8-core, 2GB DDR3 ကို, 32G Flash ကိုများအတွက် 1. ။ မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal ဘို့, အင်္ဂါရပ်တွေကို DVD player ကို, MP3 ကစားသမား, Bluetooth, GPS အညွှန်းအတွက်တည်ဆောက်ခြင်း, ရေဒီယို tuner ဖြစ်ပါသည်, wifi အတွက်တည်ဆောက်ခြင်း, screen ကိုထိ OBD ကိုထောကျပံ့, မှန် link ကို, 3G dongle ခုနစ်ပါးသောအရောင်များကိုခလုတ်အလင်းအိမ်, subwoofer, နောက်ဘက်ကင်မရာ ။ မိုက်ခရိုဖုန်း, USB, SD, ဂိမ်းထဲမှာတည်ဆောက်ခြင်း။ စတီယာရင်ဘီးကိုထိန်းချုပ်။ သင့်ကားထိုင်ခုံသည်ဆိုပါကကစတီယာရင်ဘီးကိုထိန်းချုပ်ပံ့ပိုးကူညီကြဘူး။
မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal, 6.2 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင် TFT LCD display ကိုများအတွက် 2. ။ item အရွယ်အစားအလျား 178 * 100mm ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း, ဥရောပ, အာရှ, အာဖရိက, မြောက်အမေရိက, တောင်အမေရိက, သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့တူဂျီပီအက်စ်စကားသံကိုဘာသာစကား၏အခမဲ့မြေပုံ 40 ကျော်ရှငျဘုရငျတို့အတွက်တည်ဆောက်ခြင်း, မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal သည်။ မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal, MP3, MP4, JPEG, CD, DVD-RAM ကို, ဗီဒီယိုနှင့်သဟဇာတနှစ်ခု din DVD ကိုပြန်ဖွင့်သည်။ ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal, ရေဒီယိုဥရောပ, သြစတြေးလျနဲ့တူမဆိုစျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင် RDS, တောင်အမေရိက / မြောက်အမေရိက / ရုရှားနိုင်ငံ / ဂျပန်ပါဝင်သည်။ စသည်တို့ကို
မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal, FM ရေကြိမ်နှုန်းသည် 3. 87.5-108 MH AM ကြိမ်နှုန်းဖြစ်ပါသည်: 522-1710KHZ ။ , ရုရှ, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, အာရဗီ, ဟီဘရူး, ထိုင်း, တရုတ်, ခကျြဘာသာစကားစသည်တို့ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal ၏အလိုအလျောက်လိုဂိုများအတွက်: မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal ဘို့, ဘာသာစကား၏ 40 ကျော်မျိုး အဆောက်အဦးအတွက် 50 မျိုးကိုရွေးနိုင်သည်။ မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal ၏ opational အဘို့, ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီ, 3g dongle, DVR, အထူးကေဘယ်လ်, ယာဉ်ရပ်နားအာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ်။
မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal ၏ရုပ်ပုံများ:
ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ်အော်တို အော်တိုရေဒီယိုက Universal အီလက်ထရောနစ်အော်တိုရေဒီယိုက Universal ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ် Pajero 2012 ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ် COROLLA 2015 ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ် Fluence ဘို့ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ် Kadjar 2016 ဘို့ကားတစ်စီးအီလက်ထရောနစ်